Waa Kumaa Hoggaamiyaha Iiraan, Aayatullah Cali Khameney? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
BBC Somali — January 21, 2020
hoggaamiyaha ruuxiga ah ee Iiraan Aayatullah Cali Khameney
Aayatullah Cali Khameney waa hoggaamiyaha ruuxiga ah ee Iiraan, waana mas’uulka dhinaca maamulka ugu sarreeya waddankaas. Wuxuu leeyahay amarka ugu dambeeya ee dhammaan arrimaha la xiriira siyaasadda Iiraan.
Inkastoo uu si buuxda u taageerayay kooxda dalkiisa u qaabilsaneyd wadaxaajoodyada barnaamijka nuclear-ka Iiraan, haddana Aayatullah Khameney wuxuu marar badan muujiyay sida uusan ugu qanacsaneyn natiijadii kasoo baxday wadahadalladii dhex maray Iiraan iyo dalalka quwadaha waaweyn ee caalamka. Aayatullah Cali Khameney wuxuu sanadkii 1989-kii baddalay hoggaamiyihii ruuxiga Iiraan ee ugu horreeyay, ahaana ninkii aasaasay jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan, Aayatullah Ruuxullah Khumeyni. Xilligaas ka hor wuxuu labo jeer oo isku xigta madaxweyne kasoo noqday Iiraan intii u dhaxeysay 1981-kii ilaa 1989-kii.
Bishii September 2014, Aayatullah Khameney, oo 72 jir ah, wuxuu magaalada Tehran ku maray qalliin looga sameeyay kaadi-heysta. Lama sii shaacinin wax macluumaad ah oo ku saabsan qalliinka, maadaama xaaladda caafimaad ee Aayatullah ay tahay mid mar walba la qariyo.
Xilligii uu madaxweynaha ahaa Aayatullah Khameney wuxuu si joogto ah khilaaf usoo kala dhex gali jiray Ra’iisul Wasaarihii markaas xilka hayay, Mirhossein Mousavi, kaasoo uu u arkayay inuu dhinaca bidix u janjeeray.
Cali Khameney wuxuu cabi jiray sigaarka, arrintaasoo aan lagu aqoonin dadka wadaaddada ah
Markii uu la saftay madaxweynihii hore ee Iiraan, Maxamuud Axmadinajaad, ka dib markii lagu murmay guushiisii natiijada doorashadii 2009-kii, dad badan oo reer Iiraan ah ayaa waddooyinka ku mudaharaaday iyagoo kasoo horjeeda natiijada. Musharraxiintii looga guuleystay doorashada, Mirhossein Musavi iyo Mehdi Karroubi waxay dood ka keeneen natiijada kama dambeysta ahayd.
Sanadkii 2013-kii, golahaas waxay tartanka xilka madaxweynaha ka hor istaageen Akbar Hashemi-Rafsanjani, oo ah madaxweynihii hore ee Iiraan, iyagoo u sababeeyay in da’diisu ay weyntahay. Waxaa la xasuustaa in Mr Rafsanjani uu taageeray dibadbaxyadii ka dambeeyay doorashadii 2009-kii. Aayatullah Cali Khameney wuxuu si joogto ah u taageersanaa siyaasiyiinta garabka talada haya, iyadoo xitaa ay soo baxayeen dhaliilo ku saabsan in la xagal daaciyay dimuqraaddiyadda.
Cali Khameney wuxuu madaxweynaha Iiraan ahaa muddadii u dhaxeysay 1981 ilaa 1989
Laakiin wuxuu sheegay in haddii madaxweyne Obama uu wax ka baddalo mowqifka Mareykanka, ay Iiraan iyaduna dhankeeda diyaar ka tahay. Sanadkii 2013-kii, markii loo diyaar garoobayay wadaxaajoodyadii u dhaxeeyay Iiraan iyo quwadaha caalamka, Aayatullah Cali Khameney wuxuu sheegay “inuusan kasoo horjeedin diblomaasiyadda”. Isagoo aan horay looga baranin hadallo noocaas ah ayuu sheegay in diblomaasiyadda ay horseed u tahay “dhoollacaddeynta”, wuxuuna codsaday in wadaxaajoodka la guda-galo.
Xiiligii heshiiska loo qabtay ee ahaa bishii July waa la dhaafay, labada dhinacna waxay qabsadeen ilaa bisha November, 2014-kii. Ka hor iyo ka dib intii uu socday dagaalkii uu Mareykanku horkacayay ee lagu qaaday Ciraaq, Khameney wuxuu dhaleeceyn jiray siyaasadaha maamulka Washington.
Bishii June, 2014-kii, ka dib markii ay xoogagga mintidiinta jihaad-doonka ah ee IS qabsadeen waqooyiga Ciraaq, Aayatullah Khameney wuxuu mar kale kasoo horjeestay faragalintii uu Mareykanku ku sameeyay Ciraaq. Laakiin bishii August ee isla sanadkaas, wuxuu soo dhaweeyay magacaabista Xeydar al-Cabaadi, oo laga dhigay Ra’iisul Wasaarihii Ciraaq, wuxuuna jaray taageeradii ay Iiraan u heysay Nuuri Maaliki, oo horay xulafo ula ahaa.
Tags: Aayatullah Cali Khameney?Waa Kumaa Hoggaamiyaha Iiraan
Next post Daraasad 'talo muhiim ah' Kasoo Saartay Shahwada Ragga Geeriyooday
Previous post Maxaa Ka Hortaagan Dhalinyarada Aqoontoodu inay Wax Soosaar Yeelato?
January 21, 2020 at 2:58 pm	— Reply
Iiraan waxay ka fiican tahay Carabta, maxaa yeelay waa dad illaalinaayo jiritaankooda galaadana u daba nacam leeyo.
January 21, 2020 at 2:59 pm	— Reply
Iiraan waa dal aanan aqoonin dantooda. Dagaal ayay rabaan inay dunida u horseedaan Mareykankan wuxuu sii horinayaa dhibaatada dunida taalo.